Daawo: Ruushka oo sheegay inuu dilay Hogaamiyaha Ururka Daacish | Entertainment and News Site
Home » News » Daawo: Ruushka oo sheegay inuu dilay Hogaamiyaha Ururka Daacish
Daawo: Ruushka oo sheegay inuu dilay Hogaamiyaha Ururka Daacish
daajis.com:- Wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka ayaa baaraysa bal in mid ka mid ah duqaymaha diyaaradahoodu uu dilay hogaamiyaha kooxdaka isku magacawda Dawladda Islaamka ee Daacish.
Wasaaradda ayaa sheegaytay in laga yaabo in Abu Bakar al-Baghdadi iyo ilaa 330 dagaalameyaal oo kale ay ku dhinteen duqayn ay diyaaraddoodu gaysatay 28 May.
Wasaaraddu waxay sheegtay in bartilmaameedku uu ahaa kulan ay lahaayeen kooxda Dawladda Islaamka oo ka dhacayay magaalada Raqqa oo ay sheegtay in ay caasimad u tahay oo ku taalla waqooyiga Suuriya, Marar badan oo hore ayaa la sheegay in la dilay Abu Bakr.
Warka qoraalka ah ee wasaaradda ayaa lagu sheegay in kulankaas ay ka qaybqaadanayeen 30 taliye iyo 300 askar ah, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Sputnik oo ay maalgaliso dawladda Ruushku.
In muddo ah lama ogayn meesha uu ku nool yahay Baqdadi, inkastoo la rumaysanaa in uu ku sugnaa magaalada Mawsil ee dalka Ciraaq ka hor intii aysan xulafada uu Maraykanku hogaaminayo billaabin dadaalada ay dib ugu qabsanayaan bishii Oktoobar ee 2016kii.